Dirqalaalee foo'iinsaa dabalataa qindeessa.
Fooyinsa kessaa tarree tokkoffaa ykn tarjaa tokkoffaa filataman dhiisa. Qindeessaan Kallattii jala qaaqatti argamu maqaa fii fankishinii sanduuqa mirkaneessituu hiika.
Dhanga'ina man'ee olkaawa.
Firiiwwan fooyinsaa garagalchi gara:
Tarreewwan fooyaman hammangaa man'ee ifteessiteetti garagalcha.
Tartiiba fooyi mammiloo
Iddoo kana cuqaasi irraan Tartiiba fooyi mammiloo barbaaddu fili.
Seerota fooyinsaaf afaan fili.
Afaani filachuuf filannoo fooyinsaa fili. Fakkenyaaf, afaan Jarmaniitiif arfii addaa fooyinsa keessaa unmault dabaluuf filannoo "baafatabilbilaa" fili.
Gubbaa gara Jalaattii(Tarreewwan Fooyi)
Tarreewwan gatii tarjaawwan ka'aa keessaa hammangaa filatameen fooya.
Bitaa gara Mirgaatti(Tarjaawwan Fooyi)
Tarjaawwan gatii tarreewwan ka'aa keessaa hammangaa filatameen fooya.
Title is: Dirqalaalee